Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka” Tirada Maxaabiista Soomaaliya ee ku xiran Xabsiyada caalamka hoos ayay u dhacday” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka” Tirada Maxaabiista Soomaaliya ee ku xiran Xabsiyada...
Muqdisho(SONNA) Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo maanta marti ku ahaa Barnaamijka kulanka Todobaadka jimcaha ee ka baxa TV-ga Qaranka iyo Radio Muqdisho (Codka Jamhuuriyadda Soomaaliya) ayaa ka hadlay Arimo badan oo ka mid ah howsha xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka iyo horumarada laga gaaray waajibaadka loo igmaday.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo ka hadlayay Muwaadiniin Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada caalamka ee lagu eedeeyay iney xiriir la yihiin falal burcad badeednimo ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ka war heyso xaalada muwaadiniintaasi,islamarkaana ay socdaan hanaan qaarkood lagula soo wareegayo.
Wuxuu sheegay Dr Axmed Cali Daahir in ku dhawaad 1024-ruux oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay ku xiran yihiin xabsiyada 22-dal oo ka ka mid ah caalamka,kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan la kulmaya.
Sidoo kale,Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa sheegay in si caadi ah hoos uga sii dhacayaan tirada maxaabiista ee ku xiran xabsiyada caalamka sida Siishalis,India,Kenya,Tanzaaniya,Cuman iyo waliba Wadamada Khaliijka.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Dr. Axmed Cali Daahir wuxuu carabka ku adkeeyay iney socdaan dadaalo hadda la doonayo in lagula soo wareego 12-Qof oo muwaadiniin Soomaaliya oo ku xiran dalka Siishalis,kuwaasi oo lagu eedeynayo falal burcad badeednimo.
Sidoo kale,dalka India ayuu sheegay iney u socdaan wada hadalo,islamarkaana ay kala saxiixdeen heshiisyo ay ka mid tahay isweydaarsi maxaabiis,islamarkaana hadda Dowladda ay qorsheyneyso sidii maxaabiis dhowr ah India ugala soo wareegi lahayd,sida uu Xeer ilaaliyaha hadalka u dhigay.
Dalka Cumaan,waxaana ku xiran ku dhawaad 34-ruux oo lagu eedeynayo falal burcad badeednimo,wuxuuna Dr. Axmed Cali Daahir farta ku goday iney ku daba jiraan sidii loo soo sii deyn lahaa Maxaabiistaasi.
Ugu danbeyntii,Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa xaqiijiyay iney jiraan Dalal badan oo ay kula jiraan wada hadalo lagu soo sii deynayo maxaabiista muwaadiniinta Soomaaliyeed si ay haddii ay jirto danbiga lagu eedeynayo loogu qaado wadankooda Hooyo.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhibaateysan xabsiyada dalalka caalamka kuwaasi oo lagu eedeynayo danbiyo kala duwan,waxayna Dowladda Soomaaliya dadaal ku bixineysaa sidii dhalintaasi dib loogu soo celin lahaa dalkooda Hooyo.
Previous articleGuddoomiyaasha Golaha Shacabka JFS iyo kan baarlamaanka Jabuuti oo gor dhow gaaray Baladweyne
Next articleDalka Zimbabwe oo maanta yeeshey madaxweyne cusub